MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA BULL MASTWEILER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Bull Mastweiler Dog
Bullmastiff / Rottweiler eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
Diesel the Bull Mastweiler oo jira 6 sano— 'Tani waa Diesel. Waxaan ka soo badbaadiyey aqal jiif ah wuxuuna gurigiisa la wadaagayaa eey kale oo badbaadin ah oo la yiraahdo Jake. Diesel wuxuu la mid yahay walaalkiis weyn Jake nasiib wanaagse way is fahmeen laga bilaabo maalinta 1. Diesel wuxuu ku raaxaystaa socodka iyo waqtiga ciyaarta ee Jake. Waxaan taageere u ahay Cesar Millan wax badana waan ka bartay tababarkiisa.
Bull Mastweiler ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bullmastiff iyo Rottweiler . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Carla the Bullmastiff, iskudhafka Rottweiler— Waxaan ka soo badbaadinay Carla xarun ku taal Wales. Waxaan ku arkay sawirkeeda boggooda oo aan ku dhacay iyada. Aad baan u argagaxay haddii ay dhacdo inaannaan haysan karin iyada !! Waxaan u safarnay 200 mayl si aan u helno iyadaana u qalantay saacad kasta oo ka mid ah! Waxay ahayd 3 sano jir, a Dibi Mastiff , Rottweiler qas iyo gabadha ugu cajaa'ibka badan, aad u addeecsan iyo sida gabar deggan, laakiin waxay jeclaan lahayd rooti bisad haddii ay awooddo. Waxay kaa onkodsan jirtay sida faraska markay oroddo, wiilkuna wuu xoog badnaa hadday rabto inay noqoto. Maalin kasta waxay tagi jirtay jardiinada waxayna siin jirtay qaanso weyn oo qoto dheer ka dibna wow markay sheekaysato eyga oo wadada dhinaceeda maraya 5 daqiiqo! Laakiin nasiib daro waxay si lama filaan ah ugu xanuunsatay buro weyn oo ay nala joogto. '
Carla isku dhafka Bullmastiff / Rottweiler
pekingese iyo apso lhasa isku darka
isku darka shaybaarka madow ee loo yaqaan 'pitbull'
'Luna waa qof faraxsan, kalsooni leh, oo ah gung-ho eey ah oo runtii ka faa'iideystay talooyinka ku jira websaydhkaaga. Iyadu waa cunuggaygii iigu horreeyay oo waxaa igu adkaanayay tamarteeda oo dhan , oo waxay bilawday inay muujiso calaamadaha walaaca ka imanaya inay hogaamiso. Hadda waxay ku sugan tahay dhexda Xerada Boot , wali waan la dagaallamayaa wax yar laakiin waxaan bilaabay nasasho. Waxaan u maleynayaa inay ka nastay inaysan u baahneyn inay mar dambe mas'uul noqoto! Waxaan u aaday socdo laba ilaa saddex jeer maalintii iyo raac taladaada , Waxay ku dhaygagsanaysaa isla gadaal gadaal, madaxu hoose, isagoo dhoola cadeynaya. Uma maleyneynin inaan awood u yeelan doono inaan aqristo maskaxdeeda oo aan qabto kahor / inta lagu guda jiro jahwareerka laakiin si layaab leh ayey ufududahay!
'Tani waa eeygayaga Ghana, oo halkan lagu muujiyey isagoo jira 13 bilood, dhererkiisuna yahay 42 inji iyo 75 rodol. Iyadu waa Rottweiler iyo Bullmastiff isku dhafan (Bull Mastweiler). Ghana waa eey aad u macaan. Iyadu waa aad u hyper 'marka ugu horeysa ee aad guriga timaado oo markaad jacayl siiso, waxay ku dejisaa qiyaastii 10 daqiiqo. Waxay jecel dareenka badan . Way ku raaxeysataa inay la ciyaarto eeyo kale oo ay ku jiraan walaalkeed aabe, a dhiig buuxa Bullmastiff . In kasta oo ay ey ey tahay, haddana waxay ku raaxeysataa bannaanka. Waxay jeceshahay is jiidjiidka, waa orodyahan aad u orod badan waxayna jeceshahay inay lugaheeda dambe istaagto oo ay ila dheesho. '
Ghana the Bull Mastweiler, oo halkaan lagu muujiyey isagoo jira 13 bilood, dhererkiisuna yahay 42 inji iyo 75 rodol
lhasa apso isku darka poodle yaryar
Ghana sida eey yar oo 2 bilood jir ah suuqa dhoofka iyagoo dhahaya 'hi' gabar yar
'Fiiri raadintayada! Ninkan 11-jirka ah ee Bullmastiff / Rottweiler isku jira oo la yiraahdo Mick ayaa ah kii ugu dambeeyay, ee ugu weyn ee ku soo kordhay qoyskeena! Waa ciyaar, firfircoon, jecel dareenka, waa caqli badan yahay, waana jecel yahay wax walba calali isaga oo leh ilkaha aadka u fiiqan ... xitaa annaga! Aad buu u jecel yahay mar walbana wuu ku faraxsan yahay inuu na arko, xitaa haddii aan maqneyn 5 daqiiqo. Alaabada uu ku ciyaaro ee uu ugu jecelyahay waa bisadahayada. Aad ayuu ugu heelan yahay qoyskeenna. '
Mick the puppy Bullmastiff / Rottweiler puppy at 11 toddobaad jir
Madowga ku dhufo yarka yar ee loo yaqaan 'Bullmastiff / Rottweiler' oo da 'yar 11 jir ah
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler oo jira 1 sano iyo bar, culeyskiisuna yahay 136 lbs
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler oo buuxa isagoo jira 4 sano, miisaankiisuna yahay 185 lbs
bunni iyo tan chihuahua eey
Deizel the Bullmastiff / Rottweiler oo buuxa, kuna boodaya sariirta
madow iyo cadaan isku darka chihuahua
Waylon the Bullmastiff / Rottweiler iskutallaabta, oo halkan lagu muujiyey isagoo 8 jir ah oo uu weheliyo saaxiibkiis Trevor
Waylon the Bullmastiff / Rottweiler iskutallaabta, oo halkaan lagu muujiyey isagoo 8 jir ah oo ay la socdaan Tom bisadda iyo qoyska
Liistada eeyaha isku dhafan ee Rottweiler
Liiska Eeyaha Bullmastiff Isku Darka
Liiska Eeyaha Ilaalada
Pit silky iyo isku dhafka chihuahua
ingiriiska bulldog madow iyo cadaan
isku darsanka shaybaarka madow ee lo'da Australia
somali ingiriis jir ah info ey
isku darka adhijirro reer Jarmal ah ee american bulldog
midab madow iyo midab cad